È Nwere Okpukpe nke Bụ́ Ezigbo Ya n’Okwu Gbasara Ịkpa Àgwà Ọma?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Korean Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Norwegian Nzema Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
E nwere otu nwaanyị na-arụ ọrụ n’ebe a na-elekọta ndị agadi. Aha nwaanyị a bụ Sylvia. O kwuru, sị: “Mụ na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ndị na-eme ka hà bu chọọchị n’isi gakọrọ akwụkwọ. Ma, ha na-aghọ aghụghọ n’ule. Ha na-aṅụkwa ọgwụ ọjọọ. Chọọchị ha na-aga anaghị eme ka ha na-akpa àgwà ọma.”
Otu nwoke aha ya bụ Lionel kwuru, sị: “Ndị mụ na ha na-arụ ọrụ na-agha ụgha. Ha na-ekwu na ahụ́ adịghị ha mgbe ọ na-enweghị ihe na-eme ha maka na ha achọghị ịbịa ọrụ. Ha na-aga chọọchị ka a sịkwa na ha na-aga. Chọọchị ha na-aga enweghị isi.”
N’agbanyeghị na ọtụtụ ndị nwere okpukpe ma ọ bụ chọọchị ha na-aga, nke a anaghị eme ka ha na-akpa ezigbo àgwà. Ọtụtụ ndị taa “na-eme ka hà nwere nsọpụrụ Chineke ma na-agọnahụ ike ya.” (2 Timoti 3:5) Ndị isi chọọchị ha anaghị akpa àgwà ọma. Ha anaghịkwa akụziri ndị chọọchị ha àgwà ọma ndị Baịbụl kwuru ka Ndị Kraịst na-akpa. Ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị ji eche na àgwà ha na-akpa agbasaghị Chineke.
Baịbụl gosiri na ihe ụmụ mmadụ na-eme nwere ike ịkpasu Chineke iwe ma ọ bụ mee ya obi ụtọ. Dị ka ihe atụ, mgbe ndị Izrel oge ochie nupụụrụ Chineke isi, Baịbụl kwuru na ha ‘kpasuru ya iwe.’ (Abụ Ọma 78:40) Ma, Baịbụl kwukwara na ‘a na-enwe ọṅụ dị ukwuu n’eluigwe’ mgbe otu onye mmehie chegharịrị. (Luk 15:7) Ọ bụrụ na mmadụ amụta banyere àgwà ọma ndị Chineke nwere, onye ahụ ga-ahụkwu Chineke n’anya. Nke a ga-eme ka onye ahụ hụ ihe Chineke hụrụ n’anya n’anya, ma kpọọ ihe Chineke kpọrọ asị asị.—Emọs 5:15.
Otu akwụkwọ akụkọ a na-ebipụta n’Amerịka kwuru banyere Ndịàmà Jehova, sị: “Ha na-eme ka ndị mmadụ na ndị ezinụlọ ha na-adị ná mma, ha na-emekwa ka ndị mmadụ bụrụ ezigbo ụmụ amaala na ndị na-akwụwa aka ọtọ.” Akwụkwọ ahụ kwukwara, sị: “Ha anaghị akpa àgwà otú o si masị ha. Ha kweere na mmadụ ịṅụ sịga, ịṅụbiga mmanya ókè, ịṅụ ọgwụ ọjọọ, ịgba chaa chaa, ịkwa iko nakwa nwoke na nwoke ma ọ bụ nwaanyị na nwaanyị inwe mmekọahụ ga-eme ka onye ahụ na Chineke ghara ịdị ná mma.”
Ndị isi chọọchị hà emeela ka ndị chọọchị ha na-akpa àgwà ọma?
Olee uru ịmụ banyere Chineke na-abara Ndịàmà Jehova? Sylvia, bụ́ onye a kpọrọ aha ná mmalite isiokwu a kwuru, sị: “Ndị mmadụ na-arụrụ aka n’ụlọ ọrụ anyị. Ọ dịịrị m mfe iso ha na-eme ihe ndị ha na-eme ma a sị na m chọrọ. Ma ihe nyeere m aka ime ihe ziri ezi bụ na amatara m otú obi ga-adị Jehova * ma m mee ihe ndị ahụ. Obi dị m ụtọ ugbu a, ahụ́ eruokwala m ala.” Sylvia kwetara na ime ihe ndị a na-akụziri ya n’ọmụmụ ihe Ndịàmà Jehova emeela ka àgwà ya ka mma.
^ para. 9 Baịbụl kwuru na aha Chineke bụ Jehova.